Perspectives – 2trondro
By finoana irery?
Ny Filazantsaran'i ankehitriny dia manome porofo tsara dia tsara fa any an-danitra, fihetsika miteny mafy noho ny teny. Mety ihany koa ny nanonona St. James ny Lesser, ny ihany no epistily (2:12 – 26), fa aoka ny hitondra ny (nadika) teny mivantana avy amin'ny Tompo. (Izahay nanampy vitsivitsy teo aloha ary dia mahomby amin'ny andininy anio araka ny Filazantsaran'i Matio.)
Manampy be fisalasalana Minoa (Fizarana 1)
Indraindray, Fr. Sean mahazo fanontaniana avy amin'ny mpiangona momba ny olon-tiana iray nitondra indray ny finoana katolika, ao anatin'izany toe-javatra, raha ny olona tsy mino an'Andriamanitra. Amin'ny toe-javatra ireo, voakasik'izany matetika parishioner te roa (1) valin'ireo fanontaniana na hevitra nametraka ny havanao ary (2) toro-hevitra ny amin'ny fomba tsara indrindra hamahana ireo fanontaniana sy adihevitra ny olana eo amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ilay olona.
Ny olona miady amin'ny finoana noho ny antony samihafa, ary toa izay rehetra tsy mino an'Andriamanitra / agnôstika / be fisalasalana manana na ny tsy manam-paharoa ny tantara, na zavatra niainany izay nahatonga azy ireo tsy finoana. Ny mora-fa matetika maromaro-fomba mandresy lahatra be fisalasalana mba ho diso dia ny hanolotra hevi-diso ao amin'ny filozofia mahazatra ny finoany sy ny heviny, ary izany ny tanjona ato amin'ity andian-dahatsoratra, in izay manantena ny hanome ny mpino amin'ny fomba fijery ao an-olon-tiana (ary, indray, ny zavatra inoany izay misy fiantraikany ny tsy mino an'Andriamanitra). Zava-dehibe ny fahalalana, fa ny fiaraha-miory sy ny fitiavana dia zava-dehibe ny famporisihana ny be fisalasalana mba hiverina any amin'ny finoana. 1 2
Fa izay mitady torohevitra momba ny fitarihana olona indray mino an'Andriamanitra, dia zava-dehibe ny mahatakatra sy ny manaiky fa ny finoana dia fanomezana. Raha tsy misy izany fanomezana, nino an'Andriamanitra toa toy ny tsy misy dikany sy ny finoanoam-poana. Zava-dehibe ny hanam-paharetana, ary ny mihaino ny havanao ary ny mahatsapa fa raha na rehefa tonga ny fotoana, rehefa izy nanomboka handinika indray ny zavatra inoany fa tsy misy Andriamanitra, fa ny olona dia matetika no mila mivavaka ho izany fanomezana. Izany no dingana ilaina matetika ny, ka dia mitoetra eo ho fampahatsiahivana fa ny finoana dia fanomezana zavatra fotsiny, fa tsy azo nisaina ho iray ihany tsaina.
Tsara ny manamarika fa ny mpino matetika tsy mpino dia mieritreritra fotsiny na ho sarotra, na maneho ny fahatezerany an'Andriamanitra nandritra ny lasa, ratsy hetsika. Tokoa, ny sasany dia tezitra be fisalasalana na diso fanantenana tamin'ny olon-kafa ireo manokana na ny 'fahavoazana, fa maro be fisalasalana hafa tsy mino fotsiny fa misy Andriamanitra. Satria mety ho very tsy mpino ny finoany noho ny antony samihafa, Mety samy mila manana fanontaniana hafa niresaka: tsy misy-size-mahafehy-vahaolana rehetra.
Misy marina iray manan-danja mpino rehetra dia mila mahafantatra ny hanampy indray ny very fanahy. Ao amin'ny Jaona Ch. 15, Hoy i Jesosy:
“Izaho no tena voaloboka, ary ny Raiko no mpamboly ny voaloboka. Manaisotra Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa voa, ary izay rehetra manao kosa dia amboariny, mba mitondra voa bebe kokoa. Efa rahateo ianao noho ny teny izay nolazaiko taminareo. Miray amiko, tahaka ny ho ao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa amin'ny fotoany avy izy raha tsy miray ny voaloboka, dia tsy azonao raha tsy miray amiko. Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Na iza na iza dia mitoetra ao amiko, ary Izaho kosa ao aminy dia mamoa be, satria raha misaraka amiko kosa tsy mahay manao na inona na inona ianao… Raha tsy miala amin'ny amiko sy ny teniko ho ao aminareo, mangataka na inona na inona tianareo dia mba hatao ho anao.”
Noho izany, inona no azonao atao mba hanampiana ny mpino?
Aoka ho azo antoka fa mbola miraikitra-pahavitrihana ny "voaloboka." “Sisa an'i Jesosy "dia midika hoe mihoatra noho ny fanatrehana Lamesa ny alahady. Izany dia ahitana ny fihazonana mavitrika, ny fiainana ny vavaka isan'andro sy ny fiainana ny finoanao. Ny vavaka sy ny ataony dia ho azo antoka fa ny fiainana dia hanohy hirotsaka ny alalan 'ny voaloboka ho (ary amin'ny alalan'ny) ianao.
More manokana, mivavaka amin'Andriamanitra ho an'ny mpino sy ho tia azy. Vavaka sy fanehoam-pitiavana dia zava-dehibe lavitra kokoa noho ny manana ny marina rehetra teolojika valiny, toy Nilaza i Jesosy fa Andriamanitra be fitiavana sy be fitiavana ny hafa no didy roa manan-danja indrindra. "Ho Mahafantatra anao amin'ny ny fitiavanao. (John 13:35).
Raha toa ireo fihetsika tsy mety mahafa-po noho ny fandraisana anjara amin'ny adihevitra mandresy lahatra sy ny tohan-kevitra mahery vaika, izy ireo zava-dehibe. Diniho izay mba ho fantatrareo, na mba nandre na namaky ny momba izay efa nandao ny finoana sy niverina. Saika na ahoana na ahoana. nisy olona nivavaka ho an'izany olona izany sy ny manome ohatra amin'ny alalan'ny fiainana sy ny zavatra izay nahatonga ny be fisalasalana farany mba handinika indray ny finoany. Action no miteny mafy noho ny teny!
Noho izany, fiovam-po, raha mieritreritra ny fomba hafa, Aza hamaivanina mihitsy ny herin'ny vavaka sy ny herin 'ny fitiavana.
Eritrereto ho toy “mivavaka” ny olona any an-danitra. St. Ambroise-tamin 'ny fotoana, Eveka Ambrose-dia indray mandeha nanontany iray mitomany St. Monica izay azony atao mba hitondra ny zanany, St. Augustin, indray ny finoana. Rehefa nahita ny fitiavan'ny reny ny zanany, Ambroise hoy, "Tsy misy azo atao fa ny zanak'i ranomaso be toy izany dia tokony ho very."
St. Monica nivavaka ho an'ny maro, taona maro ho an'ny zanany ny fiovam-. Rehefa avy miady amin'ny fisalasalana nandritra ny taona maro sy ny hamaliana ny maro ny fanontaniana sy ny zava-tsarotra, Augustin no niova fo. (Izy tamin'ny farany atao hoe mpampiana-Fiangonana ary canonized.) Tena Mety ho efa namaly ny vavaka nataony Andriamanitra, nefa tsy izany haingana ela tolona, nandritra izay nampihavana Augustin filozofia grika fahiny tamin'ny Kristianisma-tsy hisy St. Ary tsy misy St Augustin. Monica–fara fahakeliny, tsy toy ny malaza, olo-malaza ara-tantara ao amin'ny Fiangonana.
Ny avy eo-Eveka Ambrose ny fomba tsara indrindra angamba no torohevitra olona no mbola nanome ny foto-kevitra.
Na izany aza, please note that these articles are not meant to provide evidence of God’s existence. Soa ihany, internet articles and books on that topic abound. Koa, our intention is not to debate the evidence. Please visit a site like strangenotions.com, for those types of arguments. ↩